Category Archives: Ny fandriam-pahalemana
Virginie - Ilay Fandresena sy Fanjakana ho avy
Izao no fotoana hanangonana ny mpaminaniko.
Fr. Ottavio - Era vaovao mitondra fiadanana
Hatsangana indray ny Fiangonako…
Medjugorje - Ilay Fanavaozana ho avy
Ny Fanahy Masina dia hanova ny tarehin'ity tany ity.
Cora Evans - Ilay vanim-potoana volamena sy famoronana mistery
Amin'izany fanjakana volamena izany dia afaka mitoetra manokana aho…
Ny Era fandriampahalemana: Snippets avy amin'ny fanambarana tsy miankina maro
Misy ny marimaritra iraisana iray manontolo, manerana ireo fanambarana tsy azo itokisana manerana izao tontolo izao, fa ho avy tsy ho ela izao tontolo izao ny Andron'ny fandriampahalemana.
Pedro Regis amin'ny Andron'ny fandriampahalemana
Te hanao anao ho olomasina aho ho voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra. Sokafy ny fonao! Tsy ho ela dia hiova ho tontolo vaovao izao tontolo izao, tsy mankahala na herisetra. Ho zaridaina vaovao izao tontolo izao ary hiaina am-pifaliana daholo ny rehetra. (8 Oktobra 1988)
Medjugorje Fahitana Mirjana Soldo amin'ny Andron'ny fandriam-pahalemana
Ireo fisehoana tao Medjugorje dia nanjary nalaza indrindra teo amin'ny sehatry ny fiakanjo Marian malaza sy mahavokatra indrindra. Ny iray tamin'ireo mpahita, Mirjana, dia namoaka boky iray, ilay lohateniny izay miresaka ny Era fandriampahalemana. Handresy ny foko ny anarany, hitantsika izao manaraka izao:
Papa sy raim-pianakaviana amin'ny ora fandriam-pahalemana
Ny fiandrasana ny fotoam-piadanana dia lavitra tsy voafetra amin'ireo loharano ireo. Mifanohitra amin'izany, hitantsika izany amin'ny Rain'ny Fiangonana sy ny Papal Magisterium amin'ny vanim-potoana maoderina. Ireto misy ohatra vitsivitsy.
Luisa Piccarreta - Manafaingana ny Fiavian'ny Fanjakana
Nampirisika an'i Luisa sy isika rehetra i Jesosy hoe: "koa mivavaha ary avelao hitohy ny fitalahoanao: 'Enga anie ny Fanjakan'ny Fiatanao, ary hatao anie ny sitraponao et earth an-tany tahaka ny any an-danitra.'
Jennifer - Era amin'ny fandriampahalemana
Hoy Jesosy: Anaka, efa nandefa tafiotra sy horohoron-tany teto amin'izao tontolo izao aho ho famantarana fa mila miova ny olona. Betsaka no tsy mandray izany ho famantarana. Betsaka no tsy mahazo fa manota izy ireo. Rehefa mahita ny tafio-drivotra sy ny loza ianao dia fantaro fa ny famantarana ny fahoriana dia […]